हरर फिल्म हेरेपछि एकजनाको मृत्यु , Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
हरर फिल्म हेरेपछि एकजनाको मृत्यु
डिसी नेपाल , २३ अषाढ २०७६
बैंकक (एजेन्सी) । गएको हप्ता थाइल्याण्डमा एक व्यक्ति फिल्म हलमा मृत अवस्थामा फेला परे । हलमा हरर फिल्म लागेको थियो । बेलायती नागरिक रहेका मृतकले थाइल्याण्डमा वास्ताविक जीवनमा आधारित हरर फिल्म हेरेको जनाइएको छ ।
मृतकको नाम भने खुलाइएको छैन । फिल्म कन्जुरिंग हेर्दा उनको मृत्यु भएको बताइएको छ । यो फिल्म हेर्दा मृत्यु भएको यो पहिलो घटना भने होइन । फिल्म हल भित्र व्यक्तिलाई मृत अवस्थामा एक महिलाले फेला पारेको जनाइएको छ । ती महिलाका अनुसार फिल्म सकिएपछि पनि ती व्यक्ति हलबाट बाहिर ननिस्केपछि उनीबारे चासो दिइएको थियो । पछि उनी मृत रहेको पत्ता लाग्यो । मृतक बेलायतबाट विदा मनाउन थाइल्याण्डको पटया पुगेको जनाइएको छ । उसको उमेर ७७ वर्ष बताइएको छ ।
ती महिलाले भनिन्, ‘अचच्म, फिल्म सकिएपछि हलमा बत्ति बल्यो, तर उनी आफ्नो सिटबाट उठेनन् ।’ उनले ती व्यक्तिलाई बाहिर ल्याउन सहयोग गरेको र आकश्मिक सेवालाई खबर गरेको बताएकी छन् । त्यसपछि उनलाई एम्बुलेन्समा राखेर लगिएको थियो ।
सो घटनाका एकजना प्रत्यक्षदर्शीले घटनाबाट निकै दुःख लागेको बताएका छन् । उनले सो घटनाले आफु शक्ड भएको बताएका छन् ।